Nicki Minaj - Wikipedia, Njikotá édémédé nke onyobulạ
Onika Tanya Maraj-Petty (amuru Disemba 8, 1982), onye amara dika Nicki Minaj (/ mɪˈnɑːʒ/), bu onye amuru Trinidadian [a] onye rapper, onye ọbụ abụ na onye na-ede abụ. A maara ya maka usoro ihe nkiri ya na rap ya na ike ya dị ka onye na-ese ihe na-edekọ.
Amụrụ na mpaghara Saint James nke Port of Spain, Trinidad na Tobago ma zụlite na Queens nke New York City, ọ nwetara nkwanye ùgwù ọha mgbe ọ hapụsịrị mixtape Playtime Is Over (2007), Sucka Free (2008), na Beam Me Up Scotty ( 2009). Na mmalite ọrụ ya, Minaj bịara mara maka ejiji na wigs ya mara mma, usoro ọ na-asọ dị iche, na iji alter egos na ụda olu, bụ isi British Cockney. N'afọ 2010, Minaj wepụtara album studio mpụta mbụ ya, Pink Friday (2010), nke RIAA kwadoro platinum triple-platinum, wee ruo na nọmba-1 na chaatị Billboard 200. Otu mbụ Minaj kacha elu-ise bụ "Super Bass" ruru ọnụ ọgụgụ atọ, n'oge ahụ ghọrọ abụ solo kachasị elu nke onye na-agụ nwanyị na-agụ kemgbe 2002. Ndekọ ya nke abụọ, Pink Friday: Roman Reloaded (2012), hụrụ Minaj ka ọ na-aga n'ihu egwu-pop na ụda pop rap. Ndekọ a gbara arụkwaghịm na nọmba nke mbụ na Billboard 200, ya na otu onye ndu ya, "Starships", na-arị elu na ọnụọgụ ise na Hot 100. album Studio nke atọ na nke anọ nke Minaj, The Pinkprint (2014) na Queen (2018) . akara ọpụpụ site na ụdị mbụ ya na nlọghachi na mgbọrọgwụ hip hop ya. Otu nke abụọ nke mbụ "Anaconda" gbagoro na ọnụọgụ abụọ na Hot 100.
Njirimara ya na remix nke Doja Cat's "Say So" yana mmekorita ya na 6ix9ine, "Trollz", ha abụọ ewepụtara na 2020, bụ akara nke mbụ na nke abụọ - otu na Hot 100, n'otu n'otu, nke ikpeazụ mere ya onye nke abụọ. nwanyi rapper ga mpụta mbụ na nke mbụ, na-eso Lauryn Hill na 1998. Gụnyere atụmatụ, Minaj bụ nwanyị na-ese ihe nwere ndenye nke abụọ kachasị na Hot 100, n'azụ onye na-abụ abụ Taylor Swift, nke ọ bụla na-agbakọta ihe karịrị 100. O nwere ndị otu 10 kacha elu na chaatị ahụ, nke kachasị maka nwanyị ọ bụla rapper ruo ugbu a, anọ n'ime ndị ahụ bụ abụ solo. Mmekọrịta ya na Karol G, "Tusa", ghọrọ ọnụ ọgụgụ nke mbụ na-eme ogologo oge na Argentina, yana ngụkọta nke ihe karịrị ọnwa ise. Mweghachi ya 2021 nke mixtape 2009 Beam Me Up Scotty rụrụ arụ na ọnụọgụ abụọ na Billboard 200, na-aghọ mpụta mbụ kachasị elu maka ngwakọta rap nwanyị na eserese ahụ.
Minaj bụ otu n'ime ndị nwanyị na-ese ihe kacha ere oge niile nwere ndekọ nde 100 rere n'ụwa niile. Ọtụtụ nkwanye ugwu ya gụnyere ihe nrite egwu America asatọ, MTV Video Music Awards ise, onyinye iri na abụọ BET, onyinye Billboard Music anọ, onyinye Briten na ndekọ Guinness World Record. Billboard họpụtara ya dị ka onye na-agụ egwú nwanyị kachasị elu na 2010s, yana nke asaa n'ime ndị na-ese ihe nkiri kachasị elu nke afọ iri. Na 2016, Oge gụnyere Minaj na ndepụta ha kwa afọ nke 100 ndị kasị nwee mmetụta n'ụwa. N'èzí egwu, ọrụ ihe nkiri Minaj gụnyere ọrụ olu na ihe nkiri animated Ice Age: Continental Drift (2012) na The Angry Birds Movie 2 (2019) yana nkwado ọrụ na ihe nkiri nkiri The Ọzọ Woman (2014) na Barbershop: Mbelata na-esote (2016). Ọ pụtakwara dị ka onye ọka ikpe na oge iri na abụọ nke American Idol na 2013.
Ndụ mbido[mezie | dezie ebe o si]
A mụrụ Onika Tanya Maraj na Saint James na Disemba 8, 1982. Nna ya bụ Robert Maraj (1956-2021), onye isi ego na onye ọbụ abụ ozioma nwa oge nke Dougla (nne Afro-Trinidadian na nna Indo-Trinidadian). Nne ya, Carol Maraj, bụkwa onye na-abụ abụ ozi-ọma sitere na agbụrụ Afro-Trinidadian. Carol rụrụ ọrụ na ngalaba ịkwụ ụgwọ na ndekọ ego n'oge ntorobịa Minaj. Nna Minaj bụ mmanya na-aba n'anya na mgbawa cocaine riri ahụ ma were iwe ọkụ, gbaa ụlọ ha ọkụ na Disemba 1987. O nwere nwanne nwoke nke tọrọ aha ya bụ Jelani, nwanne nwoke nke nta aha ya bụ Maịkaya, na nwanne nwanyị nke obere aha ya bụ Ming.
Mgbe ọ bụ nwata, Minaj na nwanne ya nwoke nke tọrọ, Jelani, tolitere na nne nne ya na Saint James n'ime ezinụlọ nwere ụmụ nwanne 11. Nne Minaj, Carol Maraj, na-arụ ọtụtụ ọrụ na Saint James tupu ya enweta Green Card mgbe ọ dị afọ 24. Ọ kwagara Bronx na New York City ịga Monroe College na-ahapụ ma Minaj na Jelani na Trinidad na nne nne ha. N'ikpeazụ, mgbe Minaj dị afọ ise, Carol nwetara ụlọ mbụ ya na 147th Street na South Jamaica, Queens wee kwaga Minaj na Jelani ka ha na ya na nna ha biri. Minaj chetara, "Echeghị m na enwere m ọtụtụ ịdọ aka ná ntị n'ụlọ m. Nne m kpaliri m, ma ọ bụghị ezinụlọ siri ike. Achọkwara m ezinụlọ siri ike. " Minaj kwadoro nke ọma maka nnabata. na Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts, nke na-elekwasị anya na nka na nka. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ, Minaj chọrọ ịghọ onye na-eme ihe nkiri, wee tụba ya na egwuregwu Off-Broadway In Case You Forget na 2001.
Mgbe ọ dị afọ 19, ka ọ na-agbasi mbọ ike n'ọrụ ihe nkiri ya, ọ rụrụ ọrụ dị ka onye na-eri nri na Red Lobster na Bronx, mana a chụrụ ya n'ọrụ n'ihi nkụda mmụọ nye ndị ahịa. O kwuru na a chụrụ ya n'ọrụ "opekata mpe iri na ise" n'ihi ihe ndị yiri ya. Ọrụ ndị ọzọ gụnyere onye nnọchi anya ọrụ ndị ahịa na njikwa ụlọ ọrụ na Wall Street. Minaj na-echeta na o ji ego e nwetara n'ụlọọgwụ zụta BMW mgbe ọ dị afọ iri na itoolu.
Ntụaka[mezie | dezie ebe o si]
^ Penrose, Nerisha (June 21, 2018). "Nicki Minaj Weighs In on Children Border Crisis: 'I Came to This Country as an Illegal Immigrant'". Billboard.
^ Nicki Minaj Net Worth, Age, Career and biography facts.
Ewepụtara na https://ig.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicki_Minaj&oldid=70960
Oge ikpeazu Edeziri ihuakwụkwọ a bụ 8 Ọnwa iri na otù 2021, mgbe 18:48